Ny fitsipika fahaefatra sy farany izay afaka mitarika ny fisainanao dia ny fanajana ny zo sy ny tombontsoam-bahoaka. Ity fitsipika ity dia avy amin'ny tatitra avy amin'ny Menlo, ary mety tsy dia fantatry ny mpikaroka ara-tsosialy. Manazava ny The Menlo Report fa ny fitsipiky ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro dia tsy misy dikany amin'ny foto-kevitry ny tombontsoa, ​​fa milaza ihany koa fa tokony hajaina tsara ilay voalohany. Amin'ny ankapobeny, raha toa kosa ny fahamendrehana dia miezaka hifantoka amin'ireo mpandray anjara, ny Respect for Law and Public Interest dia mampirisika ny mpikaroka hahita fomba fijery kokoa ary hampiditra ny lalàna eo amin'ny fiheveran'izy ireo.
Ao amin'ny Menlo Report, ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro dia misy singa roa miavaka: (1) ny fanarahan-dalàna ary (2) ny fandraisana andraikitra mifototra amin'ny fangaraharana. Ny fanarahan-dalàna dia midika fa ny mpikaroka dia tokony hiezaka ny hamantatra sy hankatoavana ny lalàna manan-danja, fifanarahana ary ny fepetran'ny tolotrasa. Ohatra, ny fanarahan-dalàna dia midika fa ny mpikaroka iray mandinika ny fanakanana ny votoatin'ny tranonkala iray dia tokony hamaky sy handinika ny fifanarahana fifanarahana momba ny serivisy amin'io tranonkala io. Mety misy anefa ny toe-javatra ahafahana manitsakitsaka ny fepetran'ny serivisy; Tadidio fa ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro dia iray amin'ireo fitsipika efatra. Ohatra, tamin'ny fotoana iray, i Verizon sy AT & T dia samy manana tolotrasa fanompoana izay nanakana ny mpanjifa tsy hanakiana azy ireo (Vaccaro et al. 2015) . Tsy mieritreritra aho fa ny mpikaroka dia tsy tokony ho voafatotry ny fifanarahana fifanarahana amin'ny serivisy. Raha ny tsara indrindra, raha mandika ny fifanarahana momba ny fifanarahana ny mpikaroka, tokony hanazava ny fanapahan-kevitr'izy ireo mivantana (jereo ohatra hoe Soeller et al. (2016) ), araka ny soso-kevitr'ireo tompon'andraikitra amin'ny fangatahana mangarahara. Kanefa io fisokafana io dia mety haneho ireo mpikaroka fa mety hampidi-doza ny lalàna; any Etazonia, ohatra, ny lalàna momba ny hosoka sy fanararaotana dia mety tsy (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) ny fandikana ny fifanarahana momba ny fifanarahana (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) . Anatin'ity fifanakalozan-kevitra fohy ity dia mampiseho, anisan'izany ny fanarahan-dalàna amin'ny fanadihadiana etika dia afaka mametraka fanontaniana sarotra.
Ankoatra ny fanarahan-dalàna, ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoa ho an'ny besinimaro koa dia mamporisika ny fandraisana andraikitra mifototra amin'ny mangarahara , izay midika fa ny mpikaroka dia tokony ho mazava amin'ny tanjona, ny fomba amam-panaony ary ny vokany amin'ny dingana rehetra amin'ny fikarohana ataony ary mandray andraikitra amin'ny asany. Ny fomba iray hafa hieritreretana ny maha-tompon'andraikitra ny fangaraharana dia ny hoe manakana ny fiarahamonina mpikaroka tsy hanao zavatra ao anaty miafina izany. Io andraikitra mifandraika amin'ny fangaraharana io dia manome fahafahana hampivoatra ny vahoaka amin'ny adihevitra ety anaty aterineto, izay manan-danja ho an'ny antony ety sy mahazatra.
Ny fampiharana ny fitsipiky ny Fanajana ny Lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro ho an'ireo fikarohana telo ireo dia maneho ny sasany amin'ireo mpikaroka maro be momba ny lalàna raha ny mikasika ny lalàna. Ohatra, Grimmelmann (2015) dia nanambara fa mety ho tsy ara-dalàna ny fifandraisana ara-pihetseham-po tao amin'ny Fanjakana Maryland. Raha ny marina, ny Mari-panjakan'i Maryland Mary, 917, navoaka tamin'ny 2002, dia manitatra ny fiarovana ankapobeny ho an'ny fikarohana rehetra natao tany Maryland, tsy miankina amin'ny loharanom-bola (manam-pahaizana maro no mino fa tsy nifanaraka tamin'ny fitsipika iombonana tamin'ny Lalàna Federaly ny Emotional Contagion satria nitarika azy tao amin'ny Facebook , andrim-panjakana izay tsy mahazo vola fikarohana avy amin'ny governemanta amerikana). Na izany aza dia mino ny manam-pahaizana sasany fa ny lalàna Maryland House 917 dia tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana (Grimmelmann 2015, 237–38) . Ny fampiharana ireo mpikaroka ara-tsosialy dia tsy mpitsara, ary noho izany dia tsy ampy fitaovana mba hahatakarana sy hanombanana ny lalampanorenana momba ny lalànan'ny firenena 50 rehetra. Ireo fahasarotana ireo dia mitombo amin'ny tetikasa iraisam-pirenena. Anisan'izany, ohatra, ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena 170, izay mahasarotra ny fanarahan-dalàna ny lalàna. Ho valin'ny toe-java-manahirana ara-dalàna dia mety handray soa avy amin'ny fanadihadihana ara-etika fahatelo momba ny asany ny mpikaroka, ho loharanom-pahaizana mikasika ny fepetra takian'ny lalàna sy ho fiarovana manokana raha toa ka tsy ara-dalàna ny fikarohana nataony.
Etsy andaniny, ny fampianarana telo dia namoaka ny valiny ho an'ny gazety ivoho, ka nahatonga ny fandraisana andraikitra mangarahara. Raha ny marina dia navoaka tamin'ny endrika malalaka ny fifandraisana ara-pihetseham-po, ny vondron'olona fikarakarana sy ny olon-dehibe dia nampahafantarina - taorian'ny zava-misy - momba ny famolavolana sy ny vokatry ny fikarohana. Fomba iray haingana sy mahitsy hanombanana ny fanadihadihana mifototra amin'ny fangaraharana dia ny manontany tena hoe: azafady ve raha nosoratana teo amin'ny pejy voalohany tao amin'ny gazety misy ny tanàna misy ahy ny fomba fikarohana? Raha tsia ny valiny, dia izany no famantarana fa mety mila fiovana ny fikarohana.
Ho famintinana, ny tatitra Belmont sy Menlo Report dia manolotra fitsipika efatra izay azo ampiasaina handinihana ny fikarohana: Fanajana ny olona, ​​ny fahamendrehana, ny rariny ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro. Ny fampiharana ireo fitsipika efatra ireo amin'ny fampiharana dia tsy mora foana, ary mety mitaky fifandanjana sarotra izany. Ohatra, momba ny fanapahan-kevitra raha ny mpandray anjara avy amin'ny Emotional Contagion, dia mety heverina fa ny Fanajàna ny olona dia mety hampirisika ny fandeferana, fa ny Beneficence dia tsy mampaninona izany (raha mety hampidi-doza ny famoahana). Tsy misy fomba maika hampifandanjana ireo fitsipika mifanohitra ireo, saingy ireo fitsipika efatra ireo dia manampy amin'ny fanazavana momba ny fifanakalozana, manolotra soso-kevitra amin'ny famolavolana fikarohana, ary ahafahan'ny mpikaroka manazava ny fiheveran'izy ireo amin'ny tsirairay sy ny vahoaka.